अष्ट्रेलियामा के संघर्ष मात्र छ त ? यस्तो भन्छन् नेपाली विद्यार्थीहरु - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा के संघर्ष मात्र छ त ? यस्तो भन्छन् नेपाली विद्यार्थीहरु
Posted by Himalayan Kangaroo | १६ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०४:१४ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या तिव्र गतीमा वृद्धि भइरहेको छ। अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीहरुले यहाँ पढाइ संगै कामलाई पनि अगाडी बढाउनुपर्छ। नेपालमा परिवारसंगै बसेको व्यक्ति जब विदेशमा आउँछ र काम, पढाइ, एक्लोपनसंग जुध्नुपर्छ, पक्कै पनि सजिलो हुँदैन। तर, अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीको परिचय संघर्ष मात्र होइन, उनीहरुले आत्मनिर्भर बनेर आफ्नो करियरको अवसरको पनि सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् ।
बुटवल घर भएका पुरुषोतम अर्याल हाल चार्ल्स स्टर्ट युनिभर्सिटीमा मास्टर्स इन प्रोफेसनल अकाउन्टिंग पढ्दैछन् । उनका अनुसार अष्ट्रेलिया स्वतन्त्रता भएको, भेदभाव नभएको, काम प्रति सम्मान भएको देश हो।
उनी भन्छन्, ” नेपालमा बसेर सपना देखे जस्तो सजिलो छैन अष्ट्रेलिया । तर, समयको व्यवस्थापन गर्न सिकेर, यहाँ पढाइ पूरा गर्न सकियो भने धेरै राम्रा अवसरहरुका बाटा खुल्छन् “।
संघर्ष गर्न सक्ने हिसाबले मानसिक तथा शारीरिक रुपमा परिपक्क भएपछि र राम्रोसंग बुझेर मात्र आउन सल्लाह दिन्छन्, अर्का विद्यार्थी, आशिष बस्नेत । गुल्मी घर भएका उनी हाल चार्ल्स डार्विन युनिभर्सिटीमा बिपीए पढ्दैछन्। दाई पहिले नै अष्ट्रेलियामा भएका कारण काम खोज्न सजिलो भएको बताउने उनले कलेजको बिदाको दिनमा काम गर्ने र प्रत्येक सेमेस्टरको भर्नाको आधारमा कामको लागि समय मिलाउँछन् ।
उनको विचारमा नेपालमा पनि घरबाट टाढा रहेर आफै काम गर्दै पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियामा धेरै गार्हो हुँदैन । उनलाई अष्ट्रेलियामा देख्न पाइने अवसर र आत्मनिर्भरताका कारण अष्ट्रेलिया राम्रो लाग्छ भने कहिलेकाहीं सहयोग चाहिँदा र सहयोग गर्ने व्यक्ति नपाउँदा खिन्न लाग्छ।
ललितपुरकी रिकिता श्रेष्ठ अहिले अष्ट्रेलियाको मेलबर्न सहरमा रहेको डिकेन युनिभर्सिटीमा म्यानेजमेन्ट विषय लिएर मास्टर्स लेभलमा पढ्दैछिन्।
उनले आफ्नो अनुभवलाई यसरि बाड्छिन् , ” यहाँ काम र पढाइको बिचमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने संघर्ष छ । त्यसैले अष्ट्रेलियाको बसाइले विद्यार्थीलाई कामको सम्मान गर्न र आत्मनिर्भर बन्न सिकाउँछ । विभिन्न देशबाट आएका साथीहरुसंग संगत गर्न पाइने हुनाले, सम्बन्ध विस्तार संगै एक अर्काको संस्कृति र विचारलाई बुझ्ने अवसर पनि यहाँ पाइन्छ। यहाँ अनावश्यक रुपमा एक अर्काको मूल्यांकन गर्ने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि हुँदैन । र, यहाँ विद्यार्थीहरुको लागि अर्को राम्रो पक्ष भनेको, कक्षा छुट्यो भने पनि हामीले लेक्चरको भिडियोबाट पढ्न सकिन्छ” ।
Previousनेपाल सरकारको अनुमतिबिनै राष्ट्रसंघले गर्यो यस्तो राजनीतिक सर्वेक्षण
Nextचुरोट खाँदा चुरोटको आगो सल्किएर जलेर मृत्यु
अब अष्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसाको लागि पहिले भन्दा बढी ‘बैंक ब्यालेन्स’ देखाउनुपर्ने
२५ पुष २०७४, मंगलवार ०९:२५